Agorapulse: Sanduuqaaga Fudud, ee Midaysan ee Maareynta Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Agorapulse: Fariimahaaga Fudud, ee Midaysan ee Maareynta Warbaahinta Bulshada
Arbacada, Maarso 17, 2021 Arbacada, Maarso 17, 2021 Douglas Karr
In ka badan toban sano ka hor, Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada ee Adduunka, waxaan kula kulmay nooc aad u qurux badan oo dhalaalaya Khalad Emeric - aasaasaha iyo agaasimaha guud ee Agorapulse. Suuqa qalabka maareynta warbaahinta bulshada ayaa camiran. La siiyay Laakiin Agorapulse waxay ula dhaqantaa warbaahinta bulshada sidii shirkaduhu ugu baahan yihiin inay noqdaan ... hannaan.
Way adkaatay oo way adkaatay in la xusho aaladda saxda ah (ama qalabka) baahiyahayaga. Qofkasta (sideyda oo kale) oo isku dayaya inuu maareeyo akoonno badan oo la garaacay oo buuq ku abuuray SPAM iyo garoomada iibka, Agorapulse wuxuu jabiyey buuqa. Waxaa kaaga sii dartay, iibiyeyaasha aaladda wax badan ayey ka beddelaan wax-soo-saarkooda iyo moodeelladooda, inta badan waxay sare u qaadaan qiimaha ama waxay uga guuraan adeegga iskaa ah ee la awoodi karo illaa heerka sare ee ganacsiga
Agorapulse waa aalad maareynta Warbaahinta Bulshada oo aan aaminsanahay inay sax ku tahay. Waa tan sababta aan maalin kasta u isticmaalo oo aan ugula taliyo macmiil kasta…
Mar dambe fowdo Inbox malaha. Waqti kasta oo aan galo waxaan si cad u arkaa sanduuqa sanduuq walba oo muujinaya calaamadaha tirada i sugaysa inaan dib u eego.
Markii aan u gudubnay Agorapulse oo aan helnay meel aan ku leenahay sanduuq fariin toos ah qabanaya, waxay qabatay dhageysiga, waxaana awoodnay inaan ku soo jiidanno faallooyinka xayeysiiska isla goobta, waxaan u isticmaali karnaa sida aan u isticmaali doonno sanduuqa kale ee ku jira nidaamkayaga tikidhada.
Jamie Mendelsohn - Jacaylka
Fariin Bulsheed Midaysan Oo Loogu Talo Galay Inay Waqti Ka Badbaadiso
Agorapulse ayaa qaabeeyey ay Soodhadhka Bulshada ee Midaysan si ay kaaga caawiso inaad ku guuleysato Inbox Zero si dhakhso leh oo fudud. Dhammaan farriimaha cusub, faallooyinka, iyo xusayaasha, ee loogu talagalay Facebook, Twitter, iyo Instagram, ayaa lagu muujiyaa qaab ahaan a in dib loo eego shaandheeya si ay kaaga caawiso inaad diirada saarto waxyaabahaaga ugu dambeeya halkaasna way ku sii jirayaan ilaa aad mid kasta dib u eegto ama aad dib u eegto dhammaantood hal guji oo badhan ah Wadahadalkaaga oo dhami wuxuu ku dhacaa hal meel oo aad ka abaabuli karto, maamuli karto, ku xil saari karto, kuna calaamadeyn karto wadahadal kasta oo lala yeesho ururkaaga.
Saameeyayaasha - Eeg magaca soo diraha iyo astaantiisa meel kasta oo la xuso. Kudar sumado ku habboon si aad u kala soocdo isticmaaleyaashaada iyo qoraalada gudaha si aad u siiso macno kooxdaada.
Facebook Ad iyo Instagram Ad comments - Iswaafaji dhammaan faallooyinka xayeysiiskaaga. Hesho istaatistikada sida ugu dhakhsaha badan ee aad u rabto siday u kala horreeyaan.
Qalabka Inbox - Sifeeyaha sanduuqa, jawaabaha la keydiyay, ficilada badan, tarjumaadaha hal-guji, shaqooyinka kooxda - dhammaantood hel, iyadoo aan loo eegin qorshaha aad doorato.
Bilow Koontadaada Agorapulse ee Bilaashka ah
Daabacaadda Warbaahinta Bulshada ee Dareenka leh
Agorapulse waxay kooxdaada u suurta gelineysaa inay wax ka beddesho, la shaqeyso, oo ay abaabusho qoraaladaaga warbaahinta bulshada si ay u jadwal u sameeyaan, u oggolaadaan, una daabacaan qoraallada ay ka heli karaan waxqabadka ugu wanaagsan ee shabakad kasta oo bulsheed.
Wadashaqeynta Kooxda - La wadaag qoraallada, la soco waxyaabaha ficilka ah, oo arag cidda ku wada hadlaysa-waqtiga dhabta ah.
Kalandarka la wadaago - Isticmaalayaashu way aqbali karaan, diidi karaan, ama jawaab ka bixin karaan farriimaha shaqsiyeed. Adiga iyo macaamiishaadu waxaad sidoo kale daawan kartaan gebi ahaanba jadwalkaaga, la daabacay, si loo ansixiyo, iyo waxyaabaha la diiday.
Safka Baahinta Warbaahinta Bulshadas - Abuur qaybaha safka si aad jadwal ugu sameysid qoraallada ku saabsan waxyaabaha la xiriira iyo ololeyaasha. Hubso inaad haysato isku-dheelitirnaan weyn oo ah waxyaabaha ka kooban usbuuca oo dhan, dhammaantoodna jaleeco.
La socodka warbaahinta bulshada
Dhegeyso sheekooyinka warbaahinta bulshada ee ku saabsan astaantaada, tartankaaga, iyo booskaaga. Si dhakhso leh uga jawaab isbeddelada degdegga ah.
Filter - Xoogga saar waxa muhiimka u ah astaamaha raadinta YouTube iyo Twitter. Hoos kadhagayso waxyaabaha gaarka ah adoo adeegsanaya hawlwadeennada boolean si aad uhesho waxaad rabto.
Abaabul - Calaamadee istiraatiijiyaddaada adoo calaamadeynaya waxyaabaha, sida qoraallada muhiimka ah, waxqabadka tartame, iyo jawaab celinta macmiilka ee soo-celinta fudud iyo jawaab celinta.
Baro - Ku dul saar macmiilka, rajada, iyo fursadaha ganacsi ee cusub - xuduud la'aan.
Qiyaasaha iyo Baahinta Warbaahinta Bulshada
Soo ogow waxa ugu fiican ee nuxurka ka kooban yahay, meesha, iyo goorma. Lasoco isbeddellada iyo waxqabadka kooxdaada waxaadna ka heshaa talooyin ku saabsan hindisahaaga soo socda ee bulshada ee ku saabsan xogta habdhaqanka isticmaalaha.
Focus - Soo ogow gaadhitaanka dabiiciga, gaadhista la bixiyay, wadarta gaadhista, qasabno, iyo tirada isticmaaleyaasha ku hawlan mawduucaaga.
Ogaadaan - Eeg inta taageerayaal ah ee aad kasbatay ama lumisay, jeer waxyaabahaaga la daawado, iyo isdhexgalka waxyaabahaaga.
Cabbiraad - Si fudud ula soco waqtiyada jawaabta ee xubin kasta oo ka tirsan kooxda si loo hubiyo in dhammaan wada hadalada sumadda ee imanaya si dhakhso leh wax looga qabto. Raad-raac jawaabaha iyo faallooyinka dib loo eegay, qarsoon, iyo tirtiray.
Warbixinnada Awooda - Abuur warbixinno khaas ah oo ku saleysan cabbiraadda iyo taariikhda aad u doorato, dhammaan astaamaha bulsheed ee badan. Waxaad sidoo kale isbarbar dhigi kartaa muddooyinka waqtiga oo aad u dejin kartaa warbixinno jadwal toos ah emaylkaaga.
Xogta noocan ah waxay sahlaysaa in la muujiyo shaqada uu qabtay qofka maareeya akoon kasta. Kordhin weyn oo loogu talagalay wakaaladaha ama maareeyayaasha bulshada ee madaxa bannaan.
Madal Maareynta Warbaahinta Bulshada ee Hay'adaha
Hel aaladda kama dambaysta ah ee dhammaan-in-hal hay'ad maaraynta qalabka warbaahinta bulshada-oo lagu qiimeeyo kooxaha sii kordhaya.
Warbixinta - Si fudud u abuur oo u wadaag wada-hadallada iyo quusin qoto dheer macaamiishaada 'waxyaabaha bulshada, ka-qaybgalka, iyo koritaanka. Kasbato tan oo ah xulashooyinka qaabeynta.
Ansixinta Mawduuca - Waxaad siisaa hanaan oggolaansho oo si habsami leh loo fududeeyay. U adeegso hal jadwalka taariikhda bulshada inta ugu badan ee qorshahaagu oggol yahay. Markaad ku darto macaamiisha, waxaad ku dari kartaa kalandarrada.
doorarka - Maamulaha, tifaftiraha, qaabeeyaha, martida — u xilsaar doorka macaamiisha iyo shaqaalaha cusub. Door kastaa wuu ku kala duwan yahay marin u helkiisa boostada, jawaab, iyo warbixin.
Maareynta Warbaahinta Bulshada ee Mobile App
Waa lama huraan inaan haysto barnaamij mobilo ah oo aan ku maareeyo akoonadeyda baraha bulshada markii aan socdo, barnaamijka Agorapulse moobiilkuna waa wax walba oo aan u baahanahay! Waxaan ku maamuli karaa dhammaan daabiciddayda si fudud oo fudud oo ka socda sanduuqa bulshada ee barnaamijka!
Daah-: Anigu waxaan labaduba ahay isticmaale jecel, taageere, iyo mid ku xiran Agorapulse! Waxaan u adeegsanayaa xiriirinteyda ku xiran maqaalkan.
Tags: madal warbaahinta bulshada wakaaladdaagorapulsebufferkhalad emericFacebooktartamada facebooktartamayaasha bogga facebooktartamada jadwalka facebookInstagramLinkedInhabka oggolaanshaha warbaahinta bulshadahabka nuxurka warbaahinta bulshadamaareynta warbaahinta bulshadamaaraynta warbaahinta bulshada ee hay'adahaadduunka suuqgeynta warbaahinta bulshadakormeerka warbaahinta bulshadatabinta warbaahinta bulshadatirakoobka warbaahinta bulshadaTwitter
Si xariifnimo leh: Sida Loo Waddo Inbadan oo B2B Leeds Ah LinkedIn Sales Navigator
Sawir: Keydso, Maamul, iyo Abaabul Fiidiyow iyo Mawduucyada Warbaahinta ee hodanka ku ah Agile DAM
Aug 6, 2015 at 11: 33 AM
Waxaan isku dayay demo oo aad ayaan uga niyad jabay kuwan soo socda:
1. Awood u la'aanta jadwalka qoraallada soo noqnoqda.
2. Awood uma laha inay keydiso qoraalo qabyo ah
3. Ka jiido qoraaladii hore oo isticmaal mar kale.
Ma kala hadashay qof jooga Agorapulse wax ku saabsan casriyaynta “aaladda daabacaadda”? Waxaan isku dayayaa inaan go'aamiyo haddii aan dooneyno inaan isdul taagno iyo in kale. Ma jiraa khariidad waddo oo astaamo ah oo aad meel ku arki karto?
Aug 7, 2015 at 10: 24 AM
Salaan Jp. # 1 waa inaan waligood la hirgelin maxaa yeelay waxay xadgudub ku tahay hantida bulshada. Twitter, Facebook iyo LinkedIn ma ogolaanayaan cusboonaysiinta boostada ee soo noqnoqota. # 2 waa muuqaal xiiso leh waxayna umuuqataa fikrad aad u wanaagsan. # 3 sidoo kale waxay noqon kartaa arin ku saabsan # 1. Waxaan u diri doonaa xiriiriyahayga 'Agorapulse' mawduucan si aan uga faaloodo.
Aug 7, 2015 at 10: 44 AM
Hey Jp, jawaab celin wanaagsan! Waad ku mahadsantahay waqtiga aad siisay inaad uga jawaabto Doug 🙂
Dhab ahaantii Jp, gebi ahaanba waad saxan tahay, waxaa jira astaamo muhiim ah oo ka maqnaa aaladdayada daabacaadda. Warka wanaagsani waa: waxaan bilownay inaan ka shaqeyno iyaga 2 bilood ka hor waana soo socdaan, laga yaabee bilowga Sebtember:
- Saf loogu jiro koonto kasta, halkaas oo aad saf ugu geli karto isla waxyaabahaas dhowr jeer (haddii ay weligeed cagaar tahay, dabcan, haddii kale, waa maxay ujeedku 😉
- Aragtida jadwalka isticmaale ee saaxiibtinimada leh (adeegsadayaasheena ayaa jecel aragtida aragtidooda).
The, wax yar ka dib, waxaan ku dari doonaa daabacaadda xisaabaadka badan (ku daabac dhammaan ama xisaabaadka severakl hal mar). Kadib, waxaan ku dari doonnaa LinkedIn, ka dib Instagram, ka dibna waxaa laga yaabaa G + (wali waad la yaaban tahay midkaas)
Marka, waxaa habboon in la sugo bil kale, si gaar ah tan iyo markii aan dib u iibin doonno barnaamijkeenna moobiilka muddadaas (u gudbinta dukaanka barnaamijka maanta ka dib sannad horumarineed 🙂